प्राधिकरण ज्यालादारी कर्मचारीका तत्कालीन माग असारभित्रै पूरा हुने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
असार ०४, २०७५ 6515 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामो समयदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्दै आएका कर्मचारीले राखेका तत्कालीन माग असारभित्र पूरा गर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको निर्देशन र सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारीको समन्वयमा माग सम्बोधन गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्काल पूरा गर्न सकिने माग असारभित्रै सम्बोधन हुने बताएका छन् । असारको तलब आउँदा यसैमा मिलान गर्ने गरी माग समेटिने उनको प्रतिबद्धता छ ।
लामो समयदेखि आन्दोलित कर्मचारी माग पूरा हुने संकेत देखिएपछि उत्साहित भएका छन् । प्राधिकरणले तत्काल पूरा गर्न सकिने माग असारभित्र समाधान हुने प्रतिबद्धता जनाएको दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले बताए ।
कामअनुसार तथा काम गरेको पूरै दिनको ज्याला, काउन्टर भत्ता, सिफ्ट भत्ता, ओभर टाइम, टिएडिए, स्थायी कर्मचारी सरह जीवन बिमा लगायत माग पूरा हुने भएका छन् । यस्तै, स्थायी कर्मचारी सरह निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने अवसर दिने पनि घिसिङले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
‘दीर्घकालीन माग कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी पूरा गर्दै जाने भनिएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने, ‘मागका विषयमा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू तथा प्राधिकरणका ट्रेड युनियन संगठन सबै निकै ठूलो सहयोग रहेको छ ।’
तोकिएको कार्यालयबाट काम विशेषले अन्य ठाउँमा जाँदा वा केन्द्रीय कार्यालय आउँदा काज सुविधा दिने पनि घिसिङले बताएका छन् । प्राधिकरण नेतृत्व तथा घिसिङले चासो नदिएपछि आफ्ना माग लिएर ज्यालादारी कर्मचारी निरन्तर मन्त्री पुनलाई भेट्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय धाउने गरेका थिए ।
मन्त्री पुनले ज्यालादारीका जसरी पनि पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोही प्रतिबद्धता अनुसार उनले घिसिङलाई तुरुन्त मागको सुनुवाई हुनुपर्ने भन्दै ताकेता गरेका थिए । प्राधिकरणले मागबारे बेवास्ता गरेपछि समितिले गत सोमबार (जेठ २१ गते) देखि पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । मन्त्री पुनसँग दाङमा भएको छलफलपछि सोमबार गर्ने भनेको आन्दोलन रोकिएको थियो ।